Mmekọrịta ụlọ ọrụ na oghere nke Moxie | Blog MarTech
Oghere site na Moxie: Dezie Ahịa na Ọrụ Ndị Ahịa
Monday, June 25, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Competitivewa nke asọmpi na-arịwanye elu nke oge a na-achọ mkpebi ngwa ngwa na ọbụna ngwa ngwa ngwa ngwa, na ịrụ ụka adịghị ya na nke a chọrọ mmekọrịta siri ike. Oghere site na Moxie nwere olile anya inye ndị na-ere ahịa ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ga - eme ka ahịa, ọrụ ndị ahịa na nkwado dị n’ime ya. Site na itinye ihe niile, nnweta, njigide, na ohere dị elu nwere ike ịhazi ọnụ, egbu ma tụọ ha.
Oghere nke Moxie kachasị mma maka nnukwu òtù. Enterlọ ọrụ ahụ ga-ebu ụzọ guzobe otu na ebe, ma nye ngwaọrụ maka iyi ọrụ, blọọgụ, kalenda, ọgbakọ mkparịta ụka, mgbasa ozi, ọrụ, wikis na ihe ọ bụla achọrọ maka ọganiihu na ịga nke ọma.
Oghere nke Moxie ™ nwere onyinye ndị a maka ịre ahịa (edepụtara site na ha ndepụta ngwaahịa):
A ụlọ ọrụ zuru ezu iji ruo ndị ahịa gị ebe ọ bụla ha nọ, site na ijikọ aka na onwe ha, ihe ọmụma, email, nkata, obodo, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ịpị oku, na ịkpọ oku site na Moxie ™.
Tonweta ọdịnaya, data, ndị mmekọ, na ndị ọkachamara iji mee mkpebi ka mma na ngwa ngwa ezigbo oge nghọta.
Ngwaọrụ na-arụ ọrụ iji belata mgbahapụ weebụsaịtị, itinye ndị ahịa aka, na ụgbọala ọzọ online revenue.
Arụ ọrụ na- kesaa ozi jikọrọ ọnụ, na-agbasa mmelite dị oke egwu, ma nwekwuo nghọta na nzaghachi na mmemme ahịa.
Ngwaọrụ iji rụọ ọrụ nke ọma na-ere ma na-ere ere ma nweta data ahịa dị mkpa.
Ndị ọrụ abanyela na sistemụ ahụ nweta ngwaọrụ na ihe metụtara metụtara esemokwu ha na-arụ. Ha na-ejikọkwa onye ọkachamara dị mkpa nke nwere azịza ma ọ bụ azịza maka nsogbu ha chere ihu ma ọ bụ nkọwa doro anya ha chọrọ. Oge na mbọ echekwara na ịchọta ezigbo ozi ma ọ bụ mmadụ, ma ọ bụ gafere nyiwe dị iche iche na email, ikori ma ọ bụ rụkọta site n'ụzọ ndị ọzọ, nwere mmụba na nrụpụta na arụmọrụ. Site n'inye onye ọrụ ikike na akụnụba na ohere dị iche iche, ọ na-emekwa ka ihe ọhụụ.
Na nso nso a, Moxie emeela ka arụmọrụ nke oghere dịwanye elu site na ịtinye oghere Email na Oghere Nkata. Ọrụ abụọ a na-akwalite nkwado ndị ahịa n'ụzọ dị ukwuu site na imeziwanye ọsọ na ogo nzaghachi. Ọ na-emekwa ka arụmọrụ dị n'ime ụlọ ka mma.
Ebe Email na-arụ ọrụ nkwukọrịta ozi-e na-abawanye ọhụhụ nke nkwukọrịta dị otú ahụ n'ofe osisi ahụ. Oghere Nkata, mkparịta ụka mkparịta ụka oge, na-enye ndị ọrụ ikike iweta ndị ọkachamara n'okwu a ozugbo na nnọkọ nkata ndị ahịa.
Tags: ebe okuọwankwurịta okwuNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaemailMoxieelekọta mmadụ media
Echiche Banyere Ahịa Na Akwụkwọ?